तपाईंको छेउमा सधैँ हाजिर रहने र तपाईंको बुद्धिका कुरा सुन्‍ने सौभाग्‍य पाउने तपाईंको चाकर कति भाग्‍यमानी छन्!
२ पत्रुस 3:9
कसै-कसैले विचारेजस्‍तो परमप्रभु परमेश्‍वर आफ्‍नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न ढिलाउनुहुनेछैन। तर उहाँले तिमीहरूलाई पर्खिरहनुभएको छ। तिमीहरू कोही पनि नाश नभएको उहाँ चाहनुहुन्‍छ अनि सबैले आफ्‍ना पाप त्‍यागून् भन्‍ने उहाँको इच्‍छा छ।
दाजुभाइहरू, तिमीहरू स्‍वतन्‍त्र हुन बोलाइएका हौ। तर यो स्‍वतन्‍त्रता शारीरिक स्‍वभावअनुसार चल्‍ने नबनोस्। प्रेमले एक-अर्काको भलाइ गर
परमेश्‍वरको इच्‍छाअनुसार काम गर्न खोज्‍नेहरूले चाहिँ यो शिक्षा परमेश्‍वरतर्फबाट आएको हो कि मेरो आफ्‍नै शिक्षा हो, त्‍यो थाहा पाउनेछन्।
त्‍यसपछि येशूले आफ्‍ना चेलाहरू र त्‍यहाँ भएका मानिसहरूलाई बोलाएर भन्‍नुभयो, “हेर, कोही मेरो चेला हुन चाहन्‍छ भने उसले आफैंलाई माया मार्नुपर्छ अनि मर्नसमेत तयार भएर आफ्‍नो क्रूस बोकी मलाई पछ्याउनुपर्छ
मानिसले यसो गरुँला, उसो गरुँला, भन्‍छ तर परमप्रभुले नै उसलाई काममा डोर्‍याउनुहुन्‍छ।
हेर! म ढोकामा उभिएर ढकढक्‍याउँदै छु। कसैले मेरो सोर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म भित्र आउनेछु र ऊसित भोज खानेछु र उसले मसित खानेछ।
कसैले सरकारको विरोध गर्छ भने उसले परमेश्‍वरको आज्ञालाई नै विरोध गर्छ। यसो गर्नेहरूले सजाय पाउनेछन्
 तिमीहरू आफ्‍नो मुखले येशू नै प्रभु हुनुहुन्‍छ भनेर अरूलाई भन्‍छौ भने अनि परमेश्‍वरले उहाँलाई मरेकोबाट बिउँताउनुभयो भनी हृदयमा विश्‍वास गर्छौ भने तिमीहरू बाँच्‍नेछौ किनभने हामी हृदयले विश्‍वास गरेर नै परमेश्‍वरको सामु ठीक ठहरिन्‍छौं अनि विश्‍वास गरेका कुरा आफ्‍नै मुखले अरूलाई सुनाएर बचाइन्‍छौं
 यसैले म भन्‍दछु, पवित्र आत्‍माले भनेअनुसार हिंड र आफ्‍नो शारीरिक स्‍वभावको इच्‍छा पूरा गर्नेछैनौ किनभने शारीरिक स्‍वभावको इच्‍छा आत्‍माको अनि आत्‍माको इच्‍छाले शारीरिक स्‍वभावको विरोध गर्दछ। यी दुवै एक-अर्काका शत्रु हुन् र तिमीहरूले गर्न खोजेका कुरा हुन पाउँदैन।
 [16-17] उहाँले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “असल र खराबको ज्ञान दिने रूखको फल छोडेर बगैँचाका अरू सबै रूखका फल तँ खान सक्‍छस्। त्‍यस रूखको फल भने तैँले नखानू, खाइस् भने त्‍यही दिन तँ मर्नेछस्।” ***
 जब परमप्रभु नजिक हुनुहुन्‍छ, उहाँतिर फर्क र उहाँलाई बिन्‍ती गर। दुष्‍टहरूले आफ्‍नो बाटो छोडून् र आफ्‍नो विचार त्‍यागून्। तिनीहरू परमप्रभु हाम्रा परमेश्‍वरतिर फर्कून्, उहाँ करुणामय हुनुहुन्‍छ र प्रशस्‍त गरी क्षमा गर्नुहुन्‍छ।
 तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँमाथि विश्‍वास गरे, तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्‍वरको सन्‍तान हुने हक दिनुभयो। तिनीहरूले मानिस र उसको शारीरिक इच्‍छा-अभिलाषाबाट जन्‍म पाएका होइनन्, तर परमेश्‍वर नै तिनीहरूका पिता हुनुहुन्‍छ।
 म अहिले तिमीहरूलाई जीवन र मृत्‍यु, परमेश्‍वरका आशिष् अनि सरापमा एउटा चुन्‍ने मौका दिँदछु अनि तिमीहरू के चुन्‍छौ, त्‍यो हेर्नलाई स्‍वर्ग र पृथ्‍वीलाई साक्षी राख्‍दछु। जीवन नै रोज। परमप्रभु आफ्‍ना परमेश्‍वरलाई प्रेम गर, उहाँका आज्ञा मान र उहाँप्रति विश्‍वासयोग्‍य रहो। तब उहाँले तिम्रा पुर्खा अब्राहाम, इसहाक र याकूबलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमी र तिम्रा सन्‍तान धेरै दिन बास गर्नेछौ।”
 “अब म सार्वभौम परमप्रभु तिमी इस्राएलीहरूलाई भन्‍दै छु कि म तिमीहरू हरेकलाई तिम्रा कामअनुसार न्‍याय गर्नेछु। तिमीहरूले गरिरहेका दुष्‍ट कामहरूबाट फर्केर आओ नत्र तिमीहरू आफ्‍ना पापमा नाश हुनेछौ। ए इस्राएलीहरू हो, किन तिमीहरू नाश हुन चाहन्‍छौ? आफूले गरिरहेका खराबीहरू छोड अनि नयाँ मन र नयाँ हृदय लेओ। कोही नाश भएको म चाहन्‍नँ,” सार्वभौम परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ, “आफ्‍ना पापबाट फर्क र बाँच।”